အာဘူပြောတာလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Aha! Jokes, Satire » အာဘူပြောတာလဲ	11
Posted by ဖိုးထောင် on Jun 9, 2015 in Aha! Jokes, Satire, Other - Non Channelized, Society & Lifestyle | 11 comments
crd to original creater
မွသဲ ( 17082011 ) says: ?????????
Mike says: .ပျောက်ချက်သားကောင်းလှချည်လား ကဖိုးထောင်
မြစပဲရိုး says: Adman =aperson who works in advertising။
I know who are they. :-)))
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အသံပြန်မြင်ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်။
Ma Ma says: မှန်သားပဲ။
လူကို တည့်တည့်ကို မှန်တာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: ငယ်စဉ်နုစဉ်ကများ.. ညာချတာခံရဖူးတယ်..
သစ္စာဆိုရင်.. ပြည့်တန်ဆာမစကားနဲ့တောင်.. ဂင်္ဂါမြစ်ရေဆန်တက်တယ်တို့.. ဘာညာတို့..
အဲဒါက.. ယဉ်ကျေးမှုထဲ.. သွားစူးနေပုံရပါတယ်..။
နောက်အောင်.. နှောက်ချက်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: သဂျီးကို ဒါရိုက်မှန်လို့ ဖြေဆေးထိုးနေသည်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ရှေးက လူတွေက အကွက်မရွှေ့ဇာတ်လမ်းမများတော့ သူတို့ကအမှန်ဘဲပြောတော့သစ္စာတည်ရင် မြဲတယ်။
ခင်ခ says: ဟား ဟား ဟား ဟား
manawphyulay says: အာ မရှောင်ရင် လွတ်တယ်ကွာ…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12168
Alinsett @ Maung Thura says: adman ဆိုတာ ကြော်ငြာ ဖန်တီးသူ လို့ အဓိပ္ပာယ် ရတယ်နော်..
admin ကို ဆိုလိုရင်း မရှိဘူးလို့ ယူဆပြီး… adman ကို ပြောတယ်လို့ ယူဆလို့ ရသွားတယ်..
ဒီ ရွာထဲမှာ adman ဘနယောက်ရှိလဲ…
ပလို့ ဂျိ …
လက်လန်တယ်ဗျာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.